आइफोन १२ र १२ प्रोः क्यामराका लागि उत्कृष्ट - Aathikbazarnews.com आइफोन १२ र १२ प्रोः क्यामराका लागि उत्कृष्ट -
विश्वकै राम्रो मोवाइल कुन हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिनासाथ सबैको सोचाई आइहाल्छ- एप्पल कम्पनीद्धारा उत्पादित आइफोन ।
उत्कृष्ट मोवाइल उत्पादक कम्पनी बनेको एप्पलले विभिन्न मोडलका मोवाइलहरु बजारमा ल्याइरहेको छ । त्यसमध्येका २ मोडल हुन् आइफोन १२ र आइफोन १२ प्रो ।
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका यी २ मोडल कस्ता छन् ? यी २ मोडलमा खास कस्ता भिन्नता छन् । र, पहिलाका मोडलहरुमाभन्दा यीनमा कस्ता परिवर्तन भएका छन् ? यो मोवाइल पारखीहरुका लागि निकै चासोको विषय हो ।
एप्पलले उत्पादन गरेका यी २ मोवाइलहरुमा कस्ता परिवर्तन भएका छन् । र, कति उपयोगी छन् भन्ने कुरा कुन नजरले हेरिन्छ भन्नेमा भर पर्छ । हेर्ने नजर अनुसार यसमा मूख्य र सामान्य अपग्रेड गरिएको छ ।
रात्रीकाली फोटोग्राफी, भिडियोग्राफीमा विशेष रुची राख्नेहरुका लागि र फाइभजीमा रमाउनेहरुका लागि यी २ मोवाइलमा निकै सुधार गरिएको छ ।
तर साधारण उपभोक्ता जसको बानी विशेषत टेक्स्टिङ, बेभ सर्फ, इन्स्टा स्क्रोल र विरलै फोटो खिच्नमा मात्रै सिमित छ– उनीहरुका लागि यी मोवाइलहरु केबल आइफोन ११ जस्तै लाग्नसक्छ ।
झट्ट हेर्दा यसमा उल्लेखनीय सुधार केहि देखिँदैन । जसरी आइफोन ७ बाट आइफोन एक्स आउदा होम बटन नै हटेको थियो वा एक्सएसबाट ११ मोडलमा जाँदा अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामरा राखिएको थियो ।
गत वर्ष सार्वजनिक भएका आइफोन ११ र आइफोन ११ प्रोबीच निकै धेरै भिन्नताहरु थिए । तर आइफोन १२ र १२ प्रोमा त्यत्ति धेरै उल्लेखनीय भिन्नताहरु छैनन । यो वर्ष सार्वजनिक भएका चारवटा आइफोन १२ मोडलका मोवाइहरुमा नयाँ बक्सियर डिजाइन राखिएको जसको चारै तिर पुर्णतया फ्ल्याट रहेको छ ।
आइफोन ४ वा ५ चलाएका उपभोक्ताले आइफोन १२ सिरिज चलाउँदा फरक अनुभूति मज्जाले गर्न सक्छन् । पछिल्ला केही मोडलहरुमा राखिएको सफ्ट राउन्ड एजभन्दा अहिलेका मोडलमा राखिएको हार्ड कर्नर सहितको बक्सियर डिजाइन निकै म्याचुअर र स्टाइलिस देखिन्छ ।
गत वर्ष बजारमा आएका आइफोन ११ र ११ प्रोमा विभिन्न स्क्रिन प्रविधि र स्क्रिन साइज रहेका थिए । तर यो वर्ष आइफोन १२ र १२ प्रो दुबैमा ओएलइडी प्यानल्स फिट गरिएको छ जसलाई एप्पलले सुपर रेटिना एक्सडिआर नाम दिएको छ । यी दुबै फोनको स्क्रिी साइज पनि समान ६.१ इन्च रहेको छ । अगाडीबाट हेर्दा कुन मोवाइल कुन मोडल हो भनेर खुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।
तर यी दुई मोवाइलमा केहि फरक भने अवश्य छन् । आइफोन १२ मा एक जोडी १२ मेगापिक्सलको मेन र अल्ट्रावाइड क्यामरा रहेका छन् जबकी १२ प्रोमा आइफोन १२ मा रहेका क्यामराका साथै लिडार अर्थात् लाइट, इमेज डिटेक्सन र रेन्जिङ सेन्सर रहेको छ ।
पछिल्लो मोवाइल साधारणतया हाम्रो वरीपरिलाई म्याप गर्ने राडारजस्तै छ । आइफोन १२ प्रो को च्यासिस स्टेनलेस स्टिलबाट क्राफ्ट गरिएको छ भने आइफोन १२ को फ्रेम आल्मुनियमबाट बनेको छ ।
आल्मुनियमभन्दा स्टेनलेस स्टिल बलियो हुनाले आइफोन १२ प्रो खसेर फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ । यही फ्रेम र क्यामरामा भएको भिन्नताका कारण आइफोन १२को तौल १६२ ग्राम छ भने प्रोको तौल १८४ ग्राम छ ।
मोवाइल प्रयोगकर्ताहरुले मोवाइल हेर्दा सबैभन्दा पहिला ध्यान जाने विशेषताहरुमध्येको एक हो क्यामरा । फोटो र भिडियोका लागि प्रयोग हुने क्यामरामा कुन कुन विशेषता छन् त्यसले विशेष अर्थ राख्छ ।
आइफोन १२ सिरिज मोवाइलहरु एचडिआर प्रविधिमा आधारित डल्बी भिजनमा भिडियो खिच्ने विश्वकै पहिलोे मोवाइल डिभाइसहरु हुन् । एचडिआर अर्थात् हाई डाइनामिक रेञ्ज प्रविधिमा आधारित यो प्रविधि हलिउड स्टुडियो र माइक्रोसफ्टको नेक्ट जेनेरेसन गेमिङ कन्सोल्सहरुले प्रयोग गर्छन ।
डल्बी भिजनले भिजुअल मेटाडेटालाई डाइनामिकल्ली एडजस्ट गर्छ जसले गर्दा प्रत्येक सिन अप्टिमाइज गर्न निकै सजिलो हुन्छ ।
आइफोन १२ सिरिजले डल्बी भिजनमा भिडियो खिच्दा मेटाडाटा एजजस्ट त हुन्छन् नै । यसका अलावा प्रयोगकर्ताहरुले डल्बी भिजन क्लिप आइफोनको आफ्नै फोटो एपमा सम्पादन गर्न सक्छन् । क्लिप लोड गर्न कुनै झन्झट छैन । र, ह्याङ हुने समस्या पनि छैन ।
तर सामान्य डल्बी भिजनभन्दा आइफोन १२ मा राखिएको डल्बी भिजनमा केहि फरक छ । आइफोन १२ मा लिइने फुटेजले स्पेशल कोडेक्स प्रयोग गर्ने भएकाले कतिपय स्मार्ट टिभिहरुमा उपयुक्त नहुन सक्छ ।
तर पछिल्ला एप्पल डिभाइसहरुमा भने कुनै समस्याविनै भिडियो चल्छन् । अहिले तत्काल डल्बी भिजन आइफोन १२ क्लिप कुनै थड पार्टी भिडियो सफ्टवयरमा अपलोड गरेमा राम्रोसँग देखाउँदैन । एप्पलका उत्पादनहरुमा भने एप्पल स्पेसिफिक फम्र्याट हुने भएकाले समस्या आएको छैन ।
स्टील क्यामरा पनि किनै राम्रो रहेको छ । आइफोन १२ र १२ प्रोमा एप्पलले हाडवयरमा सुधार गरेको छ । यी दुबै मोडलमा केही ठुलो इमेज सेन्सर फिट गरिएको छ जसले २७ प्रतिशत धेरै लाइट लिन्छ । एप्पल स्ट्याण्डर्ड अनुसार यो सेन्सर ठुलो हो तर हुवाए, साओमी, सामसुङको तुलनामा सानो इमेज सेन्सर हो ।
एप्पलले सबै क्यामरामा नाइट मोड विशेषता थपेर फोटोग्राफी सेक्सनमा सुधार गरेको छ । गत वर्ष नाइट मोड मुख्य क्यामरामा मात्र उपलब्ध थियो । यो वर्ष लो–लाइट फोटोहरुमा अत्याधिक सुधार भएको छ ।
तर अध्याँरो ठाउँमा दिने लाइटका सन्दर्भमा हुवाएको पछिल्लो फोनले आइफोनलाई अझैपनि सजिलै पछि पारेको छ । आइफोन १२ प्रोमा १२ मेगापिक्सल, २ एक्स लसलेस जुमलेन्स छ जबकि हुवाएको फोनले १० एक्स लसलेस जुम गर्नसक्छ ।
निरन्तरताका सवालमा भने एप्पल अडिग रहेको छ । एन्ड्रोइड ब्राण्डका मुख्य क्यामरा र वाइड एंगल लेन्समा विभिन्न समयमा विभिन्न कलर टेम्प्रेचर देखिन्छन् तर आइफोन १२ सिरिजमा भने यो अटल रहेको छ ।
आइफोन १२ र १२ प्रोमा भएका क्यामराबीच भने नगन्य भिन्नता रहेका छन । प्रोमा विशेष गरी रातीमा केही राम्रो जुम सट रहेको छ भने अन्य विशेषताहरु उस्तै रहेका छन् ।
पछिल्लो समय निकै चासो पुर्वक हेरिएको विषय हो फाइभ जी नेटवर्क । विभिन्न मोवाइल कम्पनीले फाइभ जी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने मोवाइलहरु बजारमा ल्याएका छन । त्यसमध्ये एप्पलले पनि विभिन्न मोडलमा फाइजी नेटवर्क विशेषता थप गरेको छ ।
तर अझै पनि विश्वका केही र मुख्य स्थानमा मात्र फाइजी नेटवर्क चल्छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित मनहथान शहरमा समेत मानिसले फाइभ जी नेटवर्क चलाउन धेरै पर जानुपर्ने र एउटा कुनामा बसिरहनुपर्छ भनेर मजाक गरेका छन् ।
तर विभिन्न ठाउँमा गरिएको परीक्षण अनुसार आइफोन १२ एसमा फाइभजी नेटवर्क राम्रोसँग चलेको छ । एप्पलले पनि फाइजी थपेसँगै र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जाने भएकाले टेलिकमहरुलाई फाइभ जी सेवा छिटो उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ब्याट्री र यसको कार्यसम्पादन
मोवाइल प्रयोगकर्ताको नजरमा पर्ने अर्को विशेषता हो ब्याट्री । तर विडम्बना फाइभ जी का कारण आइफोन १२ को ब्याट्रीको जिवनमा समस्या देखिएको छ । फाइजी नेटवर्कमा मोवाइल चलाउदा दिनभर पनि ब्याट्री टिक्दैन । तर फाइभजी अफ गरेर चलाउँदा भने ब्याट्री धेरै समयसम्म टिक्छ ।
ब्याट्री चार्ज गर्न भने निकै सजिलो छ । लाइटिनिङ केबल, क्वीआई वायरलेस चार्जिङ वा आइफोन १२ सिरिजसँगै सार्वजनिक भएको म्यागसेफ चार्जिङबाट पनि चार्ज गर्न सकिन्छ ।
तर चीनका एन्ड्रोइड ब्राण्डहरुको तुलनामा आइफोन चार्ज भने निकै धेरै ढिलो हुन्छन । उदाहरणका लागि म्यागसेफ चार्जरले आइफोन एक घण्टामा ६० प्रतिशत चार्ज हुन्छ भने साओमी एमआइए १० अल्ट्रा १२ मिनटमाम ६० प्रतिशत चार्ज हुन्छ ।
एप्स चलाउने, गेम खेल्ने र भिडियो हेर्ने सन्दर्भमा भने आइफोन १२ र १२ प्रोबीचमा उल्लेखनीय भिन्नताहरु छैनन । आइफोन १२ र १२ प्रो उत्कृष्ट फोन अन्तर्गत पर्छन्, जुन चलाउन निकै सजिला छन् । भिडियो सुट गर्ने र रातीमा फोटो खिच्नेहरुका लागि यी फोनमा भएका सुधार निकै लाभदायक छन् ।
तर आइफोन ११ चलाइरहेका र भिडियो÷फोटोमा त्यति धेरै रुचि नहुने प्रयोगकर्ताहरु भने आइफोन १२ वा १२ प्रो किन्न हतार गर्नुपर्ने देखिँदैन किनकी यी २ फोनमा भएका उल्लेखनीय परिवर्तन भनेका क्यामरा नै हुन् ।
तर अलि पुराना आइफोन मोडलहरु चलाइरहेकाहरुले आइफोन १२ वा १२ प्रो प्रयोग गर्दा भने धरै परिवर्तनहरु अनुभुत गर्न सक्छन् । (फोर्ब्सको सहयोगमा)
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा १७ करोड २५ लाखमाथि